नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको साधारण सभा सम्पन्न, लाभांस वितरणको प्रस्ताव पारित Beema Patrika
काठमाण्डौ। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडको वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । आज बैंकको ३५ औँ वार्षिक साधारण सभा काठमाण्डौ दरबारमार्गस्थित बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा भर्चुअल माध्यमबाट सम्पन्न भएको हो ।
उक्त सभामा बैंकद्वारा गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित १६ प्रतिशत लाभांश अनुमोदन भएको छ।
बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्षका लागि चुक्तापुँजीको १२.६११ प्रतिशत बोनस सेयर र ३.३८९ प्रतिशत नगद लाभांश (करसहित)वितरणको प्रस्ताव गरेको थियो ।
सभामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बैंकका प्रमुख उपलब्धि, भविष्यका योजना, कार्यसम्पादन लक्ष्य र रणनीतिहरुका बारेमा छलफल भएको थियो।
यस वर्ष बैंकले रु ५.११ अर्ब रुपैयाँ सञ्चालन नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बैंकको खुद नाफा ३.५५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने बैंकको कुल चुक्ता पुँजी १८.३० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा बैंकको निक्षेप गत आर्थिक वर्षको कुल रु. १६८ अर्बबाट वृद्धि भइ १७९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यसैगरी कुल लगानी अघिल्लो वर्षको रु। १४० अर्बबाट वृद्धि भइ रु. १६२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
बैंकले ८८ शाखा, १३१ एटीएम, २० एक्सटेन्सन काउन्टर, १० राजस्व संकलन काउन्टर र ५८ शाखारहित बैंकिङ काउन्टरमार्फत आफ्ना ग्राहकलाई सेवा पुर्याउँदै आएको छ।
पाँच पटकसम्म फाइनान्सियल टाइम्सबाट ‘बैंक अफ द इयर’ अवार्ड पाइसकेको यस बैंक अन्तर्राष्ट्रिय प्रकाशन– युरोमनीबाट अनुकरणीय सेवा र व्यवसायका लागि ‘बेस्ट बैंक २०१८’ र ‘बेस्ट बैंक २०२१’ युरोमनी अवार्डबाट समेत पुरस्कृत भइसकेको छ। यसबाहेक, इक्रा नेपाल ९अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी–नेपाल० ले बैंकलाई ‘ए’ वर्गको क्रेडिट रेटिङ दिएको छ।
nepal investment bank ltd AGM